Mpanamboatra vokatra, mpamatsy | China Products Factory
SZS Gasikara PLG Boiler
SZS solika mandrehitra boiler, manamboatra amponga roa "D-type" mitsivalana, rafitry ny rindrina anaty rano, firindrana mirindra sy mifintina, mahatsapa boiler manana fahaiza-manao lehibe amin'ny ankapobeny fametrahana kely kokoa, tsy dia mampiasa vola amin'ny infrasturcture boiler trano ary fotoana fohy fametrahana.
DZH Coking aretin-tsolika Mampiasa singa amin'ny famindrana hafanana mahomby - fantsona kofehy, miaraka amin'ny haingam-pandeha mitongilana, ny fahombiazan'ny boiler dia avo noho ny fenitra matihanina nasionaly 6 ~ 8%
Tavoahangy rano mafana amin'ny amponga tokana
DZL andian-tsarintany Tovo-dranon-tsolika tokana dia manamafy ny firafitry ny fantsona voaroy; manatsara ny haavon'ny fiarovana ny tanjaka, ny mpikambana mpikambana natsangana
Ny tsipika vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia ny famonoana vainafo amin'ny alàlan'ny famonoana vainafo ary mety ho an'ny solika mora ampiasaina.
Vovo-drano mafana biomass
Biomass Hot Water boiler dia boiler mitambatra fantsom-boaloboka misy rano telo miverina. Ny solika dia mety ho Biomassa, arina, hazo, hodi-bary, akorandriaka, pellets, bagasse, fako sns.
Wood boomass Wood dia boiler composite boite telo-miverina mihemotra. Ny solika boiler dia azo ampiasaina amin'ny kitay hazo, kitay hazo ary afangaro amin'ny biomass sy arina.
Ny serivisy teknolojia fametrahana dia homen'ny XUZHOU DOUBLE RINGS MACHINERY CO., LTD mba hitazomana ny vokarintsika ho amin'ny kalitao tsara.
Ny chimney dia rafitra iray izay manome rivotra ho setroka mafana na setroka avy amin'ny vilany, fatana, lafaoro na am-patana.
Ny tsima dia matetika mitsangana, na manakaiky ny mitsangana, mba hahazoana antoka fa mikoriana tsara ny gazy, misintona amin'ny rivotra ho lasa fantatra fa toy ny tsiranoka tsiranoka na vokatry ny chimney.
Rano mafana mitete rano roa
Double Drum Hot Water Boiler SZL Series mitambatra fantsom-pivondron-drano manangona boiler roa miforitra vita amin'ny rojo vy.